Peixin akabatanidzwa muNye Yekunze Tech Asia 2019 muDelhi, India | PEIXIN
Kubva paJun 6th kusvika paJun 8th, iyo YeNau Woven Tech Asia Fair yakaitwa muDelhi. Semumwe wevanyanzvi vevatengesi, PEIXIN Boka rakava rakakurumbira. Isu takafara kwazvo kuti takawana goho rakanaka. Vazhinji uye vazhinji vanhu vanoziva nezvedu uye vanoratidza kufarira kukuru mumashini edu. Uye kutsigira kwako kuchafarirwa kwazvo.
Munguva yekurongeka, nekuda kwetekinoroji yedu yepamberi, yepamusoro-soro uye yakanaka yekuteedzera-kutengesa, Pegorin Machina yaive yakwezva vatengi vakawanda mumusika wese. Mushure mekusuma kwedu mabasa emuchina wedu, muongorori wechigadzirwa uye matekinoroji, vatengi vazhinji vakarumbidza michina, kunyanya vedu vana makapu emapepa. Takaita zvatagona kupindura mibvunzo yese zvakajeka uye nekungwarira. Vatengi vese vakagutsikana nebasa redu.
Ine anopfuura 19000 Anwendung, Nonwoven Tech Asia ndiyo nzvimbo yakakwana yekubatana nevatengi mutsva kana zvekushandisa uye kuratidzira, kusimudzira & kugadzira kuziva izvo zvichabatsira mubato risiri iro.
Indasitiri yeasinawoven se 'NEXT GEN PRODUCT' ndiyo chikamu chemabudazuva cheindasitiri yepfeko yepasi rose. India iri kubuda semutambi akakosha muindasitiri isiriyovenzi. Unwoven indasitiri munguva pfupi yadarika yakabuda senzvimbo inonyanya kufarirwa yekudyara muIndia uye ine mikana mikuru maererano nekusimudzira kukosha kwekudyara muIndia.
Mazuva ese Hutsanana Machine , Lady Pad Machine , Wet Wipes Machine , Panty Liner Production Line , Mini Pad Production Line , Dhonza Up Machine ,